मोटरसाइकल दुर्घटनामा माओवादी रुपन्देही इन्चार्जको निधन ! - ramechhapkhabar.com
मोटरसाइकल दुर्घटनामा माओवादी रुपन्देही इन्चार्जको निधन !
नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद बन्जाडे (टंकमणि) को सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको छ । दाङबाट बुटवल आउने क्रममा गएराति ८ बजे पूर्वबाट पश्चिम जाँदै गरेको ना ७ ख ९०६ नम्बरको बसले बन्जाडे सवार लु २६ प ५८९८ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा उनी घाइते भएका थिए ।
घाइते बन्जाडेको बुटवलस्थित लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बुधबार बिहान साढे बजे मृत्यु भएको माओवादी केन्द्र रुपन्देहीका संयोजक निर्मल जिसीले जानकारी दिए । दाङमा घाइते अपांगको बैठकमा सहभागी भएर फर्कंदै गर्दा बुटवल जितगढीमा दुर्घटना भएको थियो ।